Macape embwa, anodziya zvisingaiti | Imbwa Nyika
Imbwa capes chipfeko chinobatsira zvikuru mumwedzi inotonhora, kunyanya kana kunaya kana chando, kunyange zvazvo pane chimwe chinhu kune zvose zvinonaka (vanhu nembwa): raincoats, sejasi uye kunyange zvipfeko.
Munyaya ino Isu tichakuudza nezve yakanakisa capes yembwa uye, kuwedzera, tichakuudza marudzi ayo akasiyana, maitiro ekudzidzira imbwa kune zvipfeko uye kana zvakanaka kuvanza. Isu tinokurudzirawo chimwe chinyorwa ichi kubva zvipfeko zvembwa duku: majasi anodziya uye jumpers!
EQLEF Trench Coat Imbwa...
Imbwa Coat ...
1 Iyo jasi rakanakisa rembwa
1.2 Cape yembwa dzinoyevedza
1.3 Transparent hooded raincoat
1.5 Tartan kudhinda cape jasi
1.7 Muroyi chipfeko chine capita
2 Layer mhando uye mabasa
2.1 Layer sejasi
2.2 Layer sechipfeko
3 Ndinogona kupfekedza imbwa yangu here?
4 Nzira yekujairira imbwa kupfeka mbatya
5 Kupi kunotenga imbwa capes
Iyo jasi rakanakisa rembwa
Idepet Imbwa Coat ...
Iri bhachi remhando yepepi rakagadzika rakasununguka kupfeka uye kubvisa sezvo richingofanira kugadziriswa kubva kumberi. Chikamu chepakati chinogadzirisa kumusana wembwa sezvo ine elastic band, iyo inodzivisawo kufamba. Yakagadzirwa nekotoni, inodziya kwazvo uye ine fluffy uye, nekuwedzera, inowanikwa mune akawanda mavara (pink, yero, grey uye bhuruu) uye hukuru hwakasiyana. Iinewo buri diki kumashure kuti ugone kuisa tambo mukati.
Sechinhu chisina kunaka, vamwe vashandisi vanonyunyuta kuti saizi idikiNaizvozvo, kana ukafunga kuitenga, ita shuwa kuti wayera imbwa yako zvakanaka.
Cape yembwa dzinoyevedza
Bwiv Imbwa Coat ...
Iri cape jasi harisi chete rakapfava, rinodziya uye riri nyore kwazvo kupfeka (rinovhura zvachose uye rinogadzirisa nevelcro), ine zvakare yakangonaka dhizaini. Inowanikwa mune akati wandei mavara, kunyangwe grey ndiyo inopfeka zvakanyanya, uye yakanakira imbwa dzakakura. Iyo jasi inewo maviri ezvinyorwa zvinoita kuti ive yakanyanya kunaka: yakadzoserwa pasi collar inodzivirira imbwa kubva kunotonhora uye bhandi rerubha pazasi kuti riise muswe mukati kuitira kuti jira risafambe uye rinonzwa rakakura.
Dociote Waterproof ye ...
Pakati pemapepi embwa, raincoats ndiyo inonyanya kukosha. Iyi modhi ndeye cape type nekuti ine masiketi, izvo zvisingatadzisi kufamba kwembwa yedu. Iyo ine zvimwe zvinonakidza zvinhu, senge hood ine yakajeka yekumusoro chikamu kuti irege kubvisa kuoneka, inopenya tambo uye slit kumashure, yakachengetedzwa nevelcro, kubvumira tambo kuti ipfuure. Uye, chokwadi, haina mvura zvachose.
Fontee® Puppy Kisimusi ...
Krisimasi iri kuuya uye iwe ungada kukumbira imbwa yako kuti ifanane nenharaunda. Kana akabvuma (rangarira kuti haufanire kumumanikidza chero zvaangava kuti apfeke chero chaasingadi) iyi red cape ine matching hat igudo chairo. Iyo inogadziriswa nevelcro uye yakanyatsogadzikana uye inodziya, mukuwedzera, haizotadzisa kufamba kwako.
Tartan kudhinda cape jasi
Muddy Paws Coat ye ...
Pane zvinhu zvishoma zvakashongedzwa kupfuura tartan yeScottish, iyo pateni isingazobuda kunze kwechimiro uye isingataridzike yakanaka pavanhu., nembwawo. Neiyi muenzaniso wakakwana weWesty, imbwa yako inogona kuenda kunodziya kufamba. Mukuwedzera, zviri nyore kwazvo kupfeka, sezvo inongoenderana nechemberi nemabhatani maviri (haufanire kuisa makumbo chero kupi) uye nebhandi pakati.
Imbwa raincoat, ...
Iyi poncho-mhando raincoat yakanyanya, iri nyore kwazvo kupfeka, sezvo iwe uchingofanira kupinza musoro wemhuka kuburikidza nemutsipa. Gare gare, iwe unogona kugadzirisa bhanhire nevelcro uye buckle kuitira kuti chipfeko chirege kufamba zvakanyanya, pamwe chete nemabhanhire maviri kumashure elastic.. Pamusoro pekudhindwa kwecamouflage uye nekunyaradza kwayo, iyo raincoat inomira pachena nekuve neinopenya tambo yekutsvaga imbwa yako nekukurumidza kana yakadzikira. Pakupedzisira, chigadzirwa ichi chinowanikwa mune maviri mavara uye akati wandei saizi.
Muroyi chipfeko chine capita
Isu takapedza nechipfeko chinotonhorera uye chakakwana cheHalloween (kunyangwe isu tisinganeti nekusimbirira kuti, kana imbwa yako isingafarire kupfeka, usaimanikidza). Inoumbwa nezvikamu zviviri: lilac cape yeinopenya, satin-yakafanana nezvinhu inokodzera kumberi nepakati uye heti diki inoyevedza ine ma curls achibuda mairi. Haina yakasarudzika kunze kwekunakirwa zvachose!
Layer mhando uye mabasa
Macape embwa iwo ari muzvikamu zviviri zvakafara, zvichienderana nechinangwa chekuchengeta mhuka dzedu dzinovaraidza dzichidziya kana kuti dzakaoma kana kuti zvipfeko.
Sejasi, imbwa capes ipfungwa yakanaka kwazvo sezvo iri nyore kwazvo kupfeka. Kazhinji ivo vane chikamu chemberi umo makumbo epamberi anopinzwa uye chikamu, chakananga pakati pechimedu, chinobata chiuno kuitira kuti chipfeko chirege kubhururuka. Chinhu chakanaka pamusoro pegadziriro iyi haisi chete kuti yakanyatsogadzikana kupfeka uye kubvisa, asiwo kuti inovhara chikamu chikuru chembwa pasina kuomesa kufamba kwayo.
Imwe mhando huru yekapesi ndiyo inoshandiswa seyakavanzika. Kunyangwe sehembe dzinoyevedza kupfeka paKisimusi kana kupfekedza Halloween kana Carnival, capes inogona kubvumira imbwa yako kuita vampire, n'anga, muroyi ... Kuva sarudzo inoyevedza, sarudzo iyi inomutsa dambudziko rehunhu, sezvatichaona pazasi.
Ndinogona kupfekedza imbwa yangu here?
Hapana mubvunzo kuti imbwa dzinoyevedza kana dzakapfeka, kunyangwe chiri chiitiko chekuvaraidza vanhu chete chinomutsa zvimwe zvinonetsa. Nezvikonzero zvekutaurirana, imbwa yedu haigone kutiudza "bvisa jira iri kuti ndinoratidzika senge tonneau", saka, kusaziva maonero ake, uye kusave nebasa rinoshanda (zvakasiyana kana zvasvika pakupfeka kuti usatonhora, mhepo kana mvura, sezvo vachichengeta kugara kwavo zvakanaka), kuvapfekedza zvipfeko haisi pfungwa yakanaka kwazvo.
Kana uchivapfekedza zvipfeko, kunyange pasina munhu anokudzivisa, ramba uchifunga zvinotevera:
Tsvaga chipfeko chinokushandira iwe yakasununguka, iri nyore kupfeka uye kubvisa, uye haivharidzi kufamba kwako. Zvakare, edza kutsvaga saizi chaiyo uye usadzvanya zvakanyanya.
Tsvaga imwe jira risingakweshe uye kana zvichibvira chiedza.
Y pamusoro pazvose, usamanikidzire. Kana iwe ukaona kuti haana kugadzikana, bvisa chipfeko pakarepo. Kusagadzikana hakungoratidzwi chete nekuedza kubvisa chipfeko, chinogonawo kuoneka kana achinanzva zvakanyanya, kukwenya kana kumira zvakanyanya.
Nezvezvizoro, usamboshandisa chero chigadzirwa chakagadzirirwa vanhu pambwa kana imwe mhuka. Izvi hazvina kuitirwa ivo uye zvinogona kukonzera kupisa uye kusagadzikana.
Nzira yekujairira imbwa kupfeka mbatya
Kana uchida kujaira imbwa yako pfeka zvipfeko nekuti unogara munzvimbo inotonhora zvakanyanya kana inonaya mvura, cherechedza kuti:
Mamwe marudzi akatogadzirirwa kutonhora, iyo yaunozvizivisa nayo zvakakwana usati watenga jasi remhuka yako. Semuenzaniso, imbwa diki ndidzo dzinowanzokoshesa jasi rinodziya zvakanyanya.
Tsvaga imwe jasi rembwa iro rakasununguka. Ingave iri jasi remvura kana jasi, tarisa kuti magadzirirwo acho anoenderana here nezvinodiwa nembwa, kuti haidzivisi kufamba kwayo uye kuti ndihwo saizi inonyatsoienderana nayo, kwete yakakura kana diki.
Usaipfeka chete paunenge uchibuda. Chijairira zvishoma nezvishoma kuipfeka kwechinguva iwe uri kumba. Chokwadi, usambomubvumira kurara naye kana kutadza kumuona kuti usatya.
Kupi kunotenga imbwa capes
Unogona kuwana marudzi ose embatya dzembwaKwete chete mitsara, munzvimbo dzakawanda dzakasiyana, kubva kuzvitoro zvakajairwa kuenda kunzvimbo dzakashongedzerwa. Semuyenzaniso:
En Amazon Iwe uchawana huwandu hukuru hweakasiyana akaturikidzana emarudzi ese, angave ari raincoats, majasi kana kunyange zvipfeko. Ehe, teerera kune zvakataurwa nekuti dzimwe nguva mhando yacho inotambura zvishoma. Chinhu chakanaka, zvisinei, ndechekuti iwe unogona kuva nacho kumba mumazuva mashoma uye kuti kune akawanda mamodheru.
En mashopu anehunyanzvi seTiendaAnimal kana Kiwoko unogonawo kuwana zvipfeko zvinodziya zvembwa yako. Iwo mawebhusaiti asingaite chete kuve nemhando yepamusoro zvigadzirwa, asi iwe unogona zvakare kuenda kune yavo yemuviri shanduro kuti uone kana zviri izvo zvauri kutsvaga.
Chekupedzisira, imwe inonakidza sarudzo inzvimbo dzakadai Etsy, kwaunogona kuwana zvipfeko zvakagadzirwa nemaoko zvakagadzirirwa mhuka idzi. Ehe, kuve chimwe chinhu chakasarudzika uye chakaitwa nemaoko, ivo vane mutengo wakakwira zvakanyanya kupfuura dzimwe sarudzo.
Tinovimba takakubatsira iwe kuwana, pakati peiyi mirwi yekapisi yembwa, iyo inonyatsokodzera chipfuyo chako. Tiudze, imbwa yako inopfeka capes zvakanaka here? Makajairira sei? Chii chakakunakira iwe munguva yechando?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Macape embwa, anodziya zvisingaiti